Ny fihanaky ny vavonin'ny vavonin'ny taolana🥇Mahafantatra ny antony
Mahita an-tserasera ▷ 🥇
Ny rà moka eo ivelan'ny fadimbolana
2 Famakiana Min
Rà mandriaka eo ivelan'ny tonga fotoana. Olana eo ivelan'ny vanim-potoana fadimbolana dia olana mitranga amin'ny vehivavy indray mandeha eo amin'ny fiainany. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, io fandehanan-tsaina fanampiny io dia mifanaraka amin'ny antsoina hoe fandatsahan-dra. Famelana ambany kely izany izay mety hitranga amin'ny vanim-potoana fadimbolana.
Ny rà kely ivelan'ny vanim-potoana fadimbolana dia mety ho mariky ny bevohoka rehefa miseho 2 ka hatramin'ny 3 andro aorian'ny fifandraisan'ny fifandraisana akaikyohatra. Mety ho a soritr'aretina premenopause rehefa miseho amin'ny vehivavy mihoatra ny 40 taona. Fantaro ny dikan'ny fihanaky ny vohoka.
Fanondroana ny votoaty
Mandrosoa aorian'ny fanaovana firaisana
Inona no azonao lazaina?
Ny antony lehibe amin'ny fihanahan-dra eo ivelan'ny fadimbolana
Rehefa mandeha any amin'ny dokotera
Ny famaohana aorian'ny firaisana dia tsy mahazatra. Afaka miteny izany isika dia mahazatra fotsiny izany rehefa mitranga amin'ny fifandraisana ara-pananahana voalohany. Raha mitranga izany dia zava-dehibe ny mahita mpitsabo aretin-tsaina mba hahafahana manatanteraka ny fitsapana ary ny antony mahatonga ny fihanahan-dra azo hamantarana. Jereo hoe inona no fitsapana nataon'ny mpitsabo ginekinie.
Ny famafazana dia mety manondro:
Aretina azo avy amin'ny firaisana
Loza mandritra ny firaisana ara-nofo
Ny fisian'ny ratra eo amin'ny vozon-tranonjaza na mitranga noho ny tsy fahampian'ny lubrication fivaviana ohatra.
Raha misy koa ny vehivavy kansera na ovarian-tranonjaza, endometriosis, na otrikaretina bakteria na holatra, dia mety hitranga aorian'ny firaisana ara-nofo. Mianara momba ny ra mandriaka aorian'ny firaisana.
Ny famafana aorian'ny firaisana dia azo dinihina arakaraka ny habetsaky ny ra sy ny loko, miaraka amin'ny mena manopy mena manondro ny aretina na ny tsy fisian'ny lubrication, ary ny volontany manondro ny fandehanan-dra avy amin'ny leakage, maharitra maharitra 2 andro. Fantaro rehefa misy tara-pahazavana marika famantarana fampitandremana.
Ny antony lehibe amin'ny fandehanan-dra eo ivelan'ny fadimbolana dia:
Olana mifandraika amin'ny tranonjaza- Ohatra, ny fibroids, polyps, adenomatosis na homamiadana dia matetika misy ifandraisany soritr'aretina fanampiny, toy ny fiovan'ny lalànan'ny rà mahazatra, ny fandehanan-drà ivelan'ny vanim-potoana fadimbolana, ny rà na ny fanaintainana mandritra na avy eo aorian'ny firaisana. fanaintainan'ny pelvis ho an'ny fanaintainan'ny fadim-bolana fandefasana fivaviana
Olana mifandraika amin'ny hormonina ny tsingerin'ny fadimbolana, toy tsy mahay mandanjalanja ao amin'ny vehivavy dia mety misy ifandraisany amin'ny soritr'aretina mifandray amin'ny fiovan'ny hormonina, toy ny mony, ny tarehy be loatra na ny volo amin'ny vatana, ary ny fahasarotana mijanona. bevohoka.
Toe-javatra hafa: Toy ny fihanaky ny ra, ny fanafody, ny olana mifandraika amin'ny vohoka ary ny aretina hafa dia matetika misy ifandraisany amin'ny soritr'aretina fanampiny, arakaraka ny toe-java-miafina toy ny fandatsahan-dra avy amin'ny gony sy ny orona.
Ilaina ny manatona mpitsabo aretin-tsaina rehefa mandatsa:
Mitranga ivelan'ny vanim-potoana fadimbolana.
Mihoatra mandritra ny 3 andro.
Mihosin-dra mihoatra ny 3 tsingerina ny rà mikiroka.
Mitranga izany aorian'ny fifandraisana mifamatotra be loatra.
Mandritra ny mitsahatra amin'ny fananahana.
Amin'ireny tranga ireny, dia mety hanao fitsapana diagnostika ny dokotera, toy ny fitsapana Pap, ultrasound, na colposcopy anisany. Ireo fitsapana ireo dia manombatombana ny rafi-pitaterana ilay vehivavy ary fantaro raha misy ny olana mahatonga ny fandehanan-dra, manomboka ny fitsaboana mety, raha ilaina izany.
Rehefa miatrika ity karazana tranga ity isika dia ny Hiatrika fitiliana ny dokotera. Ity karazana fitsapana ity Izy ireo dia hanombana ny rafi-pitondrana vehivavy iray ary hamantatra ireo olana mety hita fa mahatonga ra mandriaka. Noho izany, ny fitsaboana sahaza dia azo atomboka mba hanamaivanana an'io toe-javatra mahasosotra io.
Flirt vondrona an'i Whatsapp
Famonosana ny horohoro
Asehoy ny hevitra
Tehirizo ny anarako, ny mailaka sy ny tranonkalako amin'ity browser ity amin'ny fotoana manaraka ny hevitrao.
Miaraha mivantana amin'ny microlaryngoscopy misy na tsy misy laser CO2
Fandidiana robotic Transoral (TORS) -.
Fadimbolana maharitra: antony mahazatra indrindra
Sintona amin'ny cystitis
Quarantine: fampiharana 12 hampiofana ny atidohanao
Ahoana no handikana ny feo ao amin'ny Google Translate?
Ianaro ny tantaran'ny fakana an-keriny izay niteraka ny teny hoe "Syndrome Stockholm"
Ahoana ny fametrahana fampahatsiahivana ao amin'ny Outlook
Ianaro ny fomba hanovana ny sarin'ny mombamomba anao ao amin'ny Badoo
Ahoana no fiasan'ny Google Translate? [Guide feno 2020]
Ahoana ny fomba handikana ny sary amin'ny alàlan'ny Google Translate?
Hijery ilay anime 40 tsara indrindra hatramin'izay
Google Maps miaraka amin'ny mozika? Fantaro ny fomba amin'ny alalan'ny Spotify
Fangatahana 10 hiadiana amin'ny tebiteby mandritra ny away
Ireo tranonkala tsara indrindra mba misintona mozika MP3 maimaimpoana
Ny lalao Nintendo Switch hafahafa
Google Maps miaraka amin'ny Google Translate: ny fomba fampiasana azy io?
Na izany aza, ahoana no nahatonga ny tranga pesta bubonic 500 taona lasa izay?
Mpandika tenin'ny tanana breziliana: Ahoana ny fomba hisintonana?
Badoo: mampiaraka ho an'ny rehetra: ahoana ny fampiasana ny fampiharana
Ny Mayans dia TSY naminavina ny faran'izao tontolo izao tamin'ny Jona 2020; hahatakatra!
Afo maimaimpoana: toro-hevitra haharesy amin'ny kianja rehetra
Mihena sakafo Android Animales Files voafafa fifanampiana ny tenimiafina vatana curiosities Mba hahitana levitra fahasamihafana bevohoka aretina family farany Fitness Historia aretina Fandikana ny nofy iPhone Lalao finday reny Minecraft Moto mifangaro navigateur Netflix sakafo vavaka alika Zavamaniry manasitrana fahasalamana Dikan'ny anarana No Category Toerana malaza Famatsy sakafo soritr'aretina Sintona avy amin'ny A ka hatramin'ny Z Tarot Lalao Cheats Videogames Miaina tsara Lahatsary sy fahitalavitra WhatsApp Africa
Twitter Araho aho!
Facebook Araho aho!
Instagram Ny Saripika!
Youtube Zahao ny lahatsary!
Mpanaraka amin'ny Internet